Ny Cook Islands Trust no manome ny fiarovana avo indrindra manerantany. Any atsimon'i Hawaii, ny Nosy Cook dia efa nanaporofo indray mandeha indray ny fotoana handraisany ny tantaran'ny lalàna momba ny fiarovana. Ny tranga rehetra nanamafisana azy dia voaro ny fananan'ny mpanjifa. Ity misy ohatra. Iza no tena mahery indrindra amin'ny mpanohitra? Maro no nilaza ny governemanta Amerikana. Nisy ny toe-javatra roa tato ho ato izay nanandrana ny fitokisana ny fitokisana ny governemanta amerikana. Tao anatin'ireo tranga roa ireo, dia very ny governemanta ary najanona ny tahiry tao anatin'ny fitokisana.
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy hiankina amin'ny fametrahana fiantohana fiantohana fiantohana ny fitantanana ny fandaniana amin'ny governemanta Amerikana. Noho izany dia mitatitra fotsiny ny zava-misy isika mba hanehoana ny tanjon'ity fitaovana ity. Noho izany, tsy milaza isika fa tokony hampiasa fiara toy izany amin'ny fomba toy izany.
Ahoana ny fomba fitokisan'ny Nosy Cook?
Toy izao no ataon-dry Cook Islands Trust araka ny tokony ho izy. Ny mpanohitra anao dia mandresy lahatra fa ny fitsarana dia mitaky anao, "Avereno ny vola." Noho izany dia manoratra taratasy miaraka aminao ianao amin'ny tompon'andraikitra izay mamela azy ireo hahafantatra fa nomena baiko hamerina ny vola ianao. Mitazona dika mitovy amin'ny taratasy sy nomerao ianao ary asehoy ilay mpitsara izay nankatoavinao. Ny mpikarakara ny sendikà, etsy ankilany, dia takiana hanaraka ny torolàlana voasoratra ao amin'ny Cook Islands Trust. Fiantohana fiarovana amin'ny fiarovana. Noho izany, ampidirinay ao amin'ny fitokisana "clause dause". Ny teboka dia milaza fa voararan'ny fampindramam-bola ny famotsorana vola rehefa voatery mandoa ny volan'ny fitsarana ny mpandray tombony.
Noho izany dia tsy hiara-miasa ny mpandoa hetra, izay miaina ivelan'ny tanindrazanao ary tsy afaka manatrika ny fitsaranao. Miaro anao amin'ny ratsy ianao satria manaiky tanteraka ny didin'ny mpitsara. Izany hoe, nangataka ny tompon'andraikitra ianao hamerina ny vola. Noho izany, dia afaka manatanteraka ny baikon'ny mpitsara ianao. Na izany aza anefa, ilay mpandoa-trangana dia tsy nanao izany, izay fiarovana marina amin'ny lalàna.
Ny fampiasana fitokisana an-dranomasina dia mitovy amin'ny tompon'ny orinasa iray mametraka orinasa any Nevada na Delaware. Nataony izany noho ny lalàna ambony kokoa, fa tsy ny fametrahana ny orinasa any amin'ny fanjakana hafa. Ny fametrahana ny fitokisany amin'ny nosy Cook na amin'ny fepetra hafa mifanandrify amin'izany mba handraisany ny lalàna ankasitrahany dia mitovy. Zava-dehibe ny fisafidianana ny fahefana amin'ny lalàna tsara indrindra amin'ny toe-javatra misy anao.
Ahoana no ahafantarako fa afaka matoky ny mpitandrim-pananana Cook aho?
Voalohany, ny mpikarakara dia tsy mila miditra mandra-pahatongan'ny "zava-dratsy". Faharoa, mbola tsy nisy mpitandrim-pananana izay nandray ny volan'ny mpanjifa. Etsy an-daniny, satria ny governemanta Cook Islands dia mifantina tanteraka izay ahafahan'izy ireo manana fahazoan-dalana azo itokisana. Ankoatr'izay, miaro tanteraka ny orinasam-panompoana izy ireo. Ireo fitaovana ara-dalàna ireo dia loharano azo avy amin'ny fidirana ho an'ny faritra. Noho izany, nahazo alalana ireo mpitandrim-pananana, mijery tsy tapaka ary manara-maso akaiky. Fahatelo, ny orinasa fiantohana dia mandidy ny mpitandrim-pananana, noho izany dia azo antoka ny vola atokisanao. Ankoatra izany, tadidio fa mametraka an'io fitaovana ara-dalàna io ianao mba hiarovana ny trosa amin'ny hetsi-panoherana tsy mendrika.
Noho izany, moa ve ianao manana lenta 100% ny vola raisinao amin'ny fitsarana? Sa aleo ianao manana fahazoan-dàlana efa nomena anao, izay tsy mbola nandray ny volan'ny mpanjifanao na inona na inona nataonao hataony: miaro ny volanao. Ankoatra izany, mampiasa orinasa iray azo itokisana izahay izay efa ho telopolo taona.
Alohan'ny "zava-dratsy" dia misarika ny sainana ianao. Ianao dia mifehy ny kaontin'ny banky, sns. Manangana orinasa tsy miankina amin'ny orinasa tsy miankina (LLC) izahay, any amin'ny nosy Nevis any Karaiba satria io fiarovan-trosa io dia manome fiarovana amin'ny fiarovana tsara indrindra LLC. Ny fitokisana dia manana 100% amin'ny LLC. Ianao no mpitantana LLC. Ny kaonty any amin'ny banky dia ao amin'ny LLC. Ianao no sonia ao amin'ny kaonty amin'ny banky.
Noho izany, mba hamerenana, ny fitokisana dia manana LLC offshore. Ianao no mpitantana ny orinasa Offshore. Manohana ny fanaraha-maso sonia amin'ny kaontin'ny banky ianao.
Rehefa nitranga ny "Ratsy Ratsy"
Rehefa mitranga ny "zava-dratsy," ny mpikarakara dia mikasa ny hiaro anao ary hanolo anao amin'ny maha mpitantana ny LLC. Noho izany, rehefa nomena baiko hamerina ny vola ianao, ilay mpitandrim-pananana, izay mipetraka ivelan'ny firenena ary tsy voafatotry ny fangatahan'ny fitsarana eo an-toerana, dia miaro ny kaontinao.
Mba hamerenana amin'ny laoniny, noho ny fiarovana ara-bola sy ny fiadanan-tsaina amin'ny mpanjifa, ny fotoana tokana ahafahan'ilay mpikarakara ny mpitsoa-ponenana dia ny haka ny volanao. Noho izany, araka ny voalaza, tsara kokoa ny manolotra ny volanao amin'ny fitaovana ara-dalàna izay miaro ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra fa tsy ny 100% azo antoka fa ny mpanohitra ara-dalàna dia hihazakazaka amin'ny harenanao sarobidy, tsy hanaiky anao ?
Raha vantany vao miala ny "zava-dratsy", ny fifehezan'ny fifehezana, ny fitantanana ny LLC, dia miverina aminao ary ianao miverina ao amin'ny seza mpamily dia hampitombo ny vola rehetra anananao. Rehefa ao anatin'ny fotoana maharitra ianao, dia afaka mandoa volavolan-dalàna ho anao ny mpikarakara anao. Afaka mandefa vola amin'ny olona izay atokisanao izy ireo, izay hikarakara anao, sns sns. Noho izany, nokarakaraina ara-bola ianao, saingy ny mpanohitra anao dia tsy afaka mahazo ny tadiny amin'ny volanao. Ny vokatry ny vokatra dia ny fiarovana sy ny harena azonao ampiasaina.
Ny fitaovana fiarovana farany indrindra
Ianao ihany no mahazo vahana eto amin'ity tany ity. Noho izany, ny fankafizana ny fiarovana resahintsika eto dia mitaky ny hetsika ataonareo. Mametraka ny fitokisana. Apetraho ao ny volanao. Betsaka ny mpanjifa no misaotra anay maimaim-poana amin'ny fanampiana azy ireo mankafy ny tombotsoan'io safidy io ary mitazona ny zava-drehetra izay niasan'izy ireo. Amin'ny lafiny iray koa, hitanay ireo mpanjifa very daholo ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fizahana paralysis.
Misy vondron'olona sasany mahaliana, toy ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana ara-dalàna izay tsy mandray karama raha voaro ny harenanao, izay manandrana mandà anao tsy hametraka fitokisana. Mety manandrana mampatahotra anao izy ireo ary manondro tranga vitsivitsy tsy fahita firy izay tsy narahin'ny mpitsara ny lalàna izay anaovan'ny mpahazo ny fitokisana azy. Izay tsy ho azon'ireo mpanavakavaka lazaina aminao dia ny tantara manontolo. Raha ny raharaha Anderson, ohatra, dia napetraka ny fahatokisana. Ny mpisolovava nametraka izany fitokisana izany dia nahatonga ny mpanjifany ho mpandray tombony amin'ny fitokisana sy ireo mpiaro ny fitokisana.
Fahadisoana tsy marina ny an'ny mpisolovava izany satria nametraka ilay mpahazo tombontsoa ho amin'ny toerana fanampiny hanehoana fahefana amin'ny fanovana ireo tompon'andraikitra sy mpahazo tombontsoa. Nilaza ny mpitsara fa izy ireo satria ireo mpahazo tombontsoa ihany koa dia mpiaro izay namorona ny tsy mety ataon'izy ireo mba hihetsika. Ny vaovao tsara dia ity testamenta ity dia testamenta tsy mampino fa na amin'ny toe-javatra nametrahana ny fitokisana aza dia mbola miaro ny fananan'ny mpanjifa ihany koa ny fitokisana.
Anisan'ny fiainana ny lalàna
Ny zaridaina rehetra dia manana ny bibiny sy ny ahitra. Noho izany, ny zaridaina rehetra dia tsy maintsy karakaraina. Tsy tokony hieritreritra toy izany fa mahamenatra. Mihetsika ny fikarakarana ny zaridaina. Tsy miova ny fiarovana ny volanao. Mila mandray andraikitra ianao hiarovana ny zaridainanao ara-bola na ny fatiantoka ara-dalàna sy ny ahi-dratsy no halaina. Mba hitazomana ny zaridaina mahasalama dia ilaina ny hetsika.
Ny fiarovana tena matanjaka indrindra amin'ny tolotra azo itokisana dia ny vola liam-bola any amin'ny banky iraisam-pirenena azo antoka. Ny banky izay ampiasaina dia tsy tokony hanana sampana mifanaraka ao amin'ny firenenao. Raha ny momba ny trano hetra, ny fitsarana eo an-toerana dia afaka misambotra trano fananana ao an-toerana. Tsara koa ny fananana fananana anatiny ao anatin'ny LLC izay fananan'ny fitokisana. Saingy, rehefa manakatra ny lohany ratsy toetra dia tsara kokoa ny mivarotra haingana ny trano sy miantoka ny vola eny amoron-dranomasina noho ny mamoy ny fananana miaraka. Ho solon'ny safidy iray, afaka mirakitra an-tsoratra ara-dalàna amin'ny fananana ny iray ary manidy ny vola miditra ao amin'ny kaonty toy izany ao anatin'ny rafitry ny fahatokisana / LLC.
Miaro ny matihanina izahay
Amin'ny fotoana tsy tapaka, manangana fitokisana ho an'ireo mpisolovava izahay, izay mivarotra indray azy ireo amin'ny mpanjifany manokana. Mampianatra seminera miaro ny fananana koa izahay ho an'ny mpikambana ao amin'ny asa ara-dalàna. Ankoatr'izay, nametraka fahatokisana marobe mivantana ho an'ny mpanjifanay izahay. Ny drafitrasa fanorenana trano fanorenana koa dia azo ampiana amin'ny fitokisana; ny dikanteny ara-dalàna amin'ny, "Rehefa maty aho dia mandeha amin'ny vadiko ny zava-drehetra ary rehefa samy maty isika dia mizara mitovy amin'ny zanatsika ny zava-drehetra," ohatra.
Mitandrema amin'ny mpanome tolotra iray ao an-tsena izay ny tetikady dia mampiroborobo ny rafitry ny fitokisana amin'ny alàlan'ny fanilihana ny safidy hafa amin'ny fiarovana, ary ao anatin'izany ny safidy horesahintsika ato. Mampiroborobo ny fahatokisan'ny mponina ao aminy izy, izay tsy mitazona ny fitsarana, ary mampihena ny safidy rehetra fa ny azy manokana. Tsy ilaina ny milaza, tsy milaza ny tranga maro izy manaporofo ny tanjaky ny fahatokisan'ny Cook Cook. Izy irery ihany no miresaka momba ireo raharaha tsy fahitana firy izay tsy narahin'ireo mpitsara ny lalàna ary nomeny lela ny mpifaninana. Ankoatra izany, mandihy manodidina an'io zava-misy io izy fa ny fiarovana dia miaro ny volan'ny mpanjifa isaky ny misy.
Ny olana mampientam-po amin'ilay safidy tadiaviny dia ny fahatokisanany ny fitokisany eo an-toerana toy ny lalitra iray eo ambany oran'ny mpitsara eo an-toerana. Noho izany, noho ny hery tsy miombom-peo naseho imbetsaka ny Nosy Cook, ny ankabeazantsika dia eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny fananana izay tsy manana ny antony manosika dia miombon-kevitra avokoa ny fifampitokisana resahina eto, amin'ny alàlan'ny lavitra, ny fiarovana matanjaka indrindra azo jerena ankehitriny.
Antsoy na oviana na oviana, ora 24 isan'andro, mba hahitana fampahalalana bebe kokoa momba ny fametrahana ny Cook Cook Trust, a Nevis LLC ary kaonty any ivelany izay hiarovana ny fanananao.